Allgedo.com » 2011 » February » 10
Home » Archive Daily February 10th, 2011 Loolanka Shirkadaha Hormuud iyo NATIONLINK oo meel sare gaaray iyo Shacabka oo Faa’iido ku qabo (Warbixin). Feb 10, 2011 Loolankii dhanka ganacsiga ee u dhexeeyay shirkadaha Isgaarsiinta Muqdisho ayaa sii kordhay kadib markii ay dhawaan xariirkii kala jarteen shirkadahaasi.
Shirkadda Isgaarsiinta NATIONLINK ayaa isku dayaysay in ay tiigsato heerka ganacsi ee saramaray oo ay shirkadda Hormuud ka wado dhamaanba gobalada dalka Somaliya.
Maalmihii lasoo dhaafay shirkadda NATIONLINK ayaa waday dardar ay macaamiil cusub kusoo... Dhaq dhaqaaqyo ciidan oo ka jira deegaanka Kalshaale. Feb 10, 2011 Dhaq dhaqaaqyo ciidan oo aad u xoog badan ayaa lagasoo sheegayaa Kalshaale iyo Meygaagleey oo ay dhawaan dagaallo ku dhaxmareen xoogaga SSC iyo Maleeshiyaad taabacsan Somaliland.
Ilo wareedyo laga helay deegaanada hoos yimaad Buuhoodle waxay sheegayaan in dhaq dhaqaaq ciidan ay wadaan dadka deegaanka oo ku kacsan maamulada Somaliland iyo Puntland.
Gaadiid dagaal oo hor leh ayay xoogaga SSC kusoo daad... Qaraxyo Khasaara dhaliyay oo Muqdisho ka dhacay. Feb 10, 2011 Warar kala gedisan ayaa kasoo baxaya qaraxyo waaweyn oo xalay magaalada Muqdisho lagula eegtay ciidamo katirsan Dowladda KMG ah iyo shirkado dowladda caawiya oo degan deegaanada AMISOM waardiyayso.
Qaraxyada oo ahaa kuwa xoogan ayaa lala eegtay fariisimo ay degmooyinka Dharkeynleey iyo Waaberi uga sugnaayeen ciidamada dowladda.
Goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxyadii xalay ay dhaawacyo iyo dhimasho... War-saxaafadeed kasoo baxay Shirka Golaha Wasiirada DKM ah ee Soomaaliya Feb 10, 2011 Muqdisho, SomaliaWaxaa maanta shirkii caadiga ahaa isugu yimid golaha Wasiirada Xukuumada Federaalka KMG ah ee Soomaaliya kulankaasi waxaa guddoominayay Ra’iisul Wasaaraha Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.
Golaha waxaa loo qeybiyay Agende ay soo diyaarisay Wasiiru Dowlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, waxayna ugu horeyntii goluhu ka doodeen dagaalka ka dhacay degaanka Kashaale iyagoo... Radio Allgedo/ Waraysiyo